Tuscany, iholide lapho minyaka yonke kuba ethandwa kakhudlwana, ingenye olunothile kakhulu izifunda Italy, indawo lapho amasimu engapheli futhi ezivinini Lihle ziphila ndawonye nezinkawu nezingwenya izihlahla zamafiri nasemizaneni ephakathi. Lapha, izivakashi uphiwa top-izinga iwayini, zibhukuda amabhishi amahle, iziphethu ezishisayo, okuyinto bagcine sebefikile nakithi kusukela ngezikhathi zeRoma.
Ngokwesibonelo, esifundazweni Siena, ungathola eziningi zokwelapha SPA-izinqubo ngqo ngaphansi esibhakabhakeni evulekile, ngenkathi kokuthatha lokubuka ubuhle bendawo we akake, uphahlwe imivini. charm abahlukile ukuvakasha unamathisele amahhotela e-Tuscany, okuyinto behlaliswe i villa ubudala, sizungezwe amapaki ayo amahle.
Tuscany izinkambo namuhla funa ngokwanele, elihlobene ne izivakashi ezivela yokuvuthwa zezithelo zomvini amnandi kuphenduke okumnandi iwayini isiNtaliyane, okuyinto wakhonza etafuleni izitsha of cuisine wendawo.
Kule ndawo kukhona ngaphezu kwesigamu wonke yobuciko Yenguquko. Mayelana medieval izikhulu Italian lapha zifane Villas eziningi nezigodlo ababengenakuzifinyelela zokuhlala zabantu abaningi kakhulu, futhi manje zenziwe emahhotela kanokusho Tuscany nge yabaphathizitsha siqu.
Ukuze amakhilomitha amaningi ogwini Sea Ligurian, amabhishi esimhlophe, egxilile zasemazweni bemvelo imithombo yemvelo amapaki. Futhi amandla okwelapha lendawo ashisayo iziphethu Spas ukuheha abathandi spa zokwelapha kanye uhlobo abathandi iholide enempilo. Kubalandeli of ukuyothenga, kukhona inala Izitolo nezitolo abaklami abadumile, kanye isikhumbuzo kanye jewelry ezitolo.
Tuscany Amahhotela ukunikela izivakashi leli holidi ezihlukahlukene kakhulu - amabhishi Sea, amahhotela ezishisayo kanye edolobheni, izinqaba nemizi emikhulu e Montalcino futhi Chianti. Njalo edolobheni ezinkulu esifundeni lezihambi elinde inqwaba sites, ezinye zazo bayazazi eziningi engekho.
I indawo ephansi kakhulu Tours dolobha odumile Tuscany - Florence. Lo muzi wasendulo Italian - i Museum ongaphandle, kuyinqolobane Italy kwamasiko. Ukuze ubone yonke zalo ezikhangayo, uzodinga ukuba bangabi nje uze lapha. Tour iqalwe kusukela le Uffizi Gallery, bese uba khona ezinhlelweni Academy of Fine Arts, zibabaza Palazzo Pitti futhi Palazzo Medici, Florence Cathedral, njll Kusukela Florence ungaya esifundazweni Pisa ubone edumile 'kokuwa' umbhoshongo, bese - .. Ukuze Siena lapho abahambi uzobe enchanted lombhishobhi elihle Siena, imibhoshongo San Gimignano sika.
Ngokwemvelo, lokhu kusho Tuscany, ngokuba Isifunda esingasogwini, futhi linikeza izivakashi omkhulu lolwandle iholide. Ngenxa yale njongo, izivakashi ngokuvamile ukubhuka amahhotela kakade ezifundazweni Tuscany Versilia kanye Grosseto noma Livorno. Lapha wonke umuntu angakhetha bona indawo sootvetvii ngokugcwele akuthandayo zabo siqu.
Ezinye amahhotela Tuscany zifane izinqaba, lapho izivakashi bazizwa kwezicebi yizicukuthwane noma marquises, kodwa abaningi bathanda ukuhlala futhi emapulazini yangasese, ukunikela okuthuthuke kakhulu kulezi zindawo agrotourism.
Ikhadi laseBhange elinemali yokubuyisela emuva kanye nesithakazelo ebhalansi: ukubuka konke okunikezwayo okuhle kakhulu